एजेन्सी । लामो समयदेखि इजरायलको सत्ता सम्हाल्दै आएका ६९ वर्षीय प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले आफूले सरकार गठन गर्न नसकेको बताउँदै विपक्षीलाई सरकार गठन गर्न आग्रह गरेका छन् । एक दशकभन्दा लामो सम...
एजेन्सी । जिम्बाबेमा खडेरी र खाद्यान्न अभावका कारण गएको दुई महिना यता ५५ वटा हात्ती मरेका छन् । देशको ह्वांगे नेशनल पार्कका प्रवक्ता टिनाशे फाराओले भने,‘‘भोकमरीका कारण ती हात्ती मरेका हुन् । यो ठूलो ...
एजेन्सी । चिलीको राजधानी स्यान्टियागो नजिकै लुटेराहरूले लुगाफाटामा आगो लगाएपछि पाँच व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। सेना र पुलिसले प्रदर्शनकारीहरूका विरुद्ध अश्रु ग्यास र पानीको तोप प्रयोग गरेका छन् साथै देश...
एजेन्सी । अष्ट्रेलियामा सोमबार बिहान देशका अखबारहरुका पहिलो पृष्ठ कालो रङको छापिएको दुर्लभ घटना यतिखेर विश्वको ध्यान खिच्न सफल भएको छ । अखबारहरुले देशमा मिडियामाथि लगाम लगाउने प्रयासको विरोध गर्न उक्त...
भोग लाग्नु, समयमा निद्रा लाग्नु राम्रो स्वास्थ्यको संकेत हो । तर अहिले हामी न त समयमा खाना खाइरहेका छौ न त सुति नै रहेका छौ। हामीले सुनेका छौं, हाम्रा पूर्खाहरु ढुंगाको सिरानी लगाएर मस्त निदाउँथे । अह...
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी म्यानमारको ५ दिने राजकीय भ्रमण पुरा गरेर आज जापान जाने भएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल जापानी सम्राट् नोरुहितोको राज्याभिषेक...
एजेन्सी । टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तैयप अर्दोगानले उत्तरी सिरियाको सीमाको प्रस्तावित ‘सेफ जोन’ बाट नहटे कुर्द लडाकुको टाउको काट्ने धम्की दिएका छन् । टर्की बिहीबारमात्रै कुर्द लडाकुविरुद्ध सो क्षेत्रमा...
नेल्सन मण्डलाको छोरी ‘डामिनी’ दक्षिण कोरियाको राजदूत
एजेन्सी । दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाकी छोरी जेनानी मण्डेला-डामिनी दक्षिण कोरियाको राजदूतमा नियुक्त भएकी छन् । गत अक्टोबर २ मा दक्षिण कोरियाको सियोल पुगेकी जेनानीले बिहीबार कोरिया...
मस्जिदमा हमला, ६२ जनाको मृत्यु
एजेन्सी । अफगानिस्तानको नन्गाहर शहरमा एक मस्जिदमा भएको शक्तिशाली विस्फोटनमा ६२ जनाको मृत्यु भएको छ ।मस्जिदको छत नै खस्नेगरी हिजो(शुक्रबार) भएको उक्त विस्फोटमा ठूलो संख्यामा घाइते भएको अधिकारीले जनाएक...
जापानमा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ७७ पुग्यो !
एजेन्सी । जापानमा आएको पछिल्लो आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको जापानी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । अधिकारीहरूको बिहीबारको विवरण अनुसार आँधीका कारण जापानमा मृत्यु हुनेको स...
टर्की कुर्दमाथि आक्रमण रोक्न सहमत
एजेन्सी । अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले टर्की उत्तरी सिरियामा आफ्नो सैन्य अभियान रोक्न सहमत भएको बताएका छन् । यसबाट कुर्द नेतृत्वका लडाकूलाई पछि फर्किन सजिलो हुने उनको भनाई छ । अंकारामा पेन्सले ट...
ट्रम्पको चिठी अर्दोआनलाई : म टर्कीको अर्थव्यवस्था बर्बाद पारिदिन्छु !
एजेन्सी । टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआनलाई पत्र लेख्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले हिजो(बुधबार) सिरियामा कुर्दिसविरुद्ध हमला रोक्न आग्रह गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले ज...
स्काभेटरसँग यात्रुवाहक बस ठोक्किदा ३५ जनाको मृत्यु
एजेन्सी । साउदी अरबमा यात्रुवाहक बस दुर्घटनाग्रस्त हुँदा ३५ जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य ४ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । स्काभेटरसँग यात्रुवाहक बस ठोक्किदा सो दुर्घटना भएको प्रहरी प्रवक्ताको भनाई उदृत ग...
एजेन्सी । बृहस्पतिको चार ठूला चन्द्रमाहरु मध्ये 'युरोपा'मा बर्फले ढाकिएको सतहमुनी समुन्द्री पानी रहेको एक अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । सोधकर्ताहरूको अनुसार आउँदो वर्षहरुमा विश्वलाई युरोपाको रसायनशास्त...
हिउँले ढाकिएको ‘माउन्ट पेक्टु’मा नेता किमको सेतो घोडा
एजेन्सी । उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उन सेतो रङको घोडामा सवार भई देशको सबैभन्दा अग्लो हिमाल (माउन्ट पेक्टु) को आरोहण गरेको दृश्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले उच्च प्राथमिकता दिँदै फोटो फिचर प्रका...
सार्वभौमिक मताधिकारको बारेमा छलफल शुरु गर्न सम्भव छैन- क्यारी लाम
एजेन्सी । हंगकंगकी नेत्री क्यारी लामले अहिलेको अवस्थामा हंगकंगमा सार्वभौमिक मताधिकारको बारेमा छलफल गर्न थाल्नु सम्भव नभएको बताएकी छिन् । उनका अनुसार यसका लागि युरोपेली संघका प्रतिनिधीसँग आपसी छलफल गरि...
अमेरिकाद्वारा टर्कीमाथि नाकाबन्दी,१ लाख ६० हजार मानिस विस्थापित
एजेन्सी । टर्कीले सिरियाको उत्तरी भागमा आक्रमण गरेसँगै अमेरिकाले टर्कीका केही मन्त्रालय र वरिष्ठ अधिकारीहरुलाई नाकाबन्दीको घोषणा गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टर्कीका राष्ट्रपति रिसे...
सन् २०१९ का लागि अर्थशास्त्रका नोबल पुरस्कार विजेताहरु नेपालसँग सम्बद्ध रहेका छन्। सोमबार तीनजना अमेरिकी अर्थशास्त्रीलाई यस वर्षको नोबल पुरस्कार दिने घोषणा भएको हो। विजेतामा अभिजित बेनर्जी, उनकी श्रीम...
काठमाडौं । आज अक्टोबर १५ अर्थात विश्व हात धुने दिवस । नियमित सफासँग हातधुने बानी बसाल्दा धेरै सरुवा रोगबाट बच्न सकिने अध्ययनले देखाए पनि नेपालमा भने बजेटकै अभावमा यो दिवस मनाउन छोडिएको छ । सरुवा रोगको...
हागीबस आँधीले लियो २५ जनाको ज्यान, एक वृद्धा हेलिकोप्टरबाट खसिन्
एजेन्सी । कम्तीमा २५ जनाको ज्यान जानेगरि आएको हगिबिस नामक शक्तिशाली आँधीका कारण जापान सरकारले उक्त क्षेत्रमा दशौँ हजार सुरक्षाकर्मी तथा उद्धारकर्ताहरूलाई परिचालन गरेको छ। हगिबिस आँधीका कारण राजधानी ...